1 यो लेख पढ्नुहोस् जुन एप्पल वाचमा फेसटाइमको प्रक्रियाको बारेमा पूर्ण जानकारी समावेश गर्दछ.
2 एप्पल वाच सिरी प्रयोग गरेर कसरी फेसटाइम कल गर्न
3 एप्पल वाच फोन अनुप्रयोग प्रयोग गरेर कसरी फेसटाइम कल गर्न
यो लेख पढ्नुहोस् जुन एप्पल वाचमा फेसटाइमको प्रक्रियाको बारेमा पूर्ण जानकारी समावेश गर्दछ.
फेसटाइम अडियो कल को पूर्ण स्पष्ट स्थिर को खातामा अन्य एप्पल उपकरण प्रयोगकर्ता संग कुरा गर्न एक अविश्वसनीय तरिका हो. तर यो आफ्नो iPhone वा iPad गर्न प्रतिबन होइन. तपाईं बनाउन सक्छ फेसटाइम अडियो आफ्नो एप्पल वाच पुकार्ने, साथै. तपाईं सिरी वा फोन आवेदन उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ कि बिना, एक फेसटाइम कल राख्दै पर्याप्त सरल छ.
एप्पल वाच सिरी प्रयोग गरेर कसरी फेसटाइम कल गर्न
भन्नु “नमस्कार सिरी“, डिजिटल क्राउन मा प्रेस र होल्ड, वा ट्याप गर्नुहोस् सिरी ग्याजेट मामला मा तपाईं यसलाई उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ सिरी हेर्ने अनुहार.
राज्य “फेसटाइम (सम्पर्क नाम)“.
तपाईंको एप्पल वाच वर्तमान आफ्नो सम्पर्क उपयोग कल गर्न जारी हुनेछ फेसटाइम अडियो.
तपाईंको कल आनन्द.
एप्पल वाच फोन अनुप्रयोग प्रयोग गरेर कसरी फेसटाइम कल गर्न
खुला फोन आवेदन आफ्नो मा स्याउ वाच.
ट्याप गर्नुहोस् संपर्क.
अन ट्याप गर्नुहोस् सम्पर्क तपाईं कल गर्न आवश्यक संग.
यस फोन प्रतीक ट्याप गर्नुहोस्.
ट्याप गर्नुहोस् फेसटाइम अडियो.
यो लेखको प्रक्रियाको बारेमा पूर्ण जानकारी समावेश जो पढ्न एप्पल वाच फेसटाइम. प्रयोग गर्न दिइएको रूपमा कदम पालना एप्पल वाच फेसटाइम सिरी वा एप्पल अनुप्रयोग प्रयोग.
अन्तर्गत फाइल: डाउनलोड फेसटाइम Tagged With: FaceTime Call on Apple Watch